အိုမင်းခြင်းကော်ဖီ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှ အိုမင်းခြင်းကော်ဖီ အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
NEW WEI-LIN ENTERPRISE CO., LTD. ၏စက်ရုံတစ်ရုံကိုတိုက်ရိုက်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါသည် အိုမင်းခြင်းကော်ဖီ in Taiwan။ တည်ငြိမ်နည်းပညာ back-up နဲ့ပြီးတဲ့နောက်-ရောင်းချခြင်း၌ကောင်းသောဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကုမ္ပဏီဒေသခံကျောက်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ ပို. ပို. ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်၏အစိတ်အပိုင်းများကြသည်အောက်ပါ, ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိုးကားနိုင်ရန်ပိုမိုမော်ဒယ်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုပူဇော်ခြင်းငှါဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏။ ယခုဆက်သွယ်ရန်!
အကောင်းဆုံး အိုမင်းခြင်းကော်ဖီ ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် အိုမင်းခြင်းကော်ဖီ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ အိုမင်းခြင်းကော်ဖီ ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
Alishan ကော်ဖီစေ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Alishan ကော်ဖီဥယျာဉ်၌စိုက်ထိုင်ဝမ်’s Chiayi Alishan Alpine ကော်ဖီ,1 အမြင့်မှာစိုက်ပျိုး,မီတာ 000 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို,အဝတ်လျှော်ခြင်းဖြင့်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်Alishan ကော်ဖီတွင်ချဉ်သောအရသာရှိပြီးလန်းဆန်း။ သန့်ရှင်းသောအရသာရှိသည်.Alishan ကော်ဖီမှာသကြားမပါဘဲမွှေးသောအရသာရှိသည်,နှင့်အရသာချိုမြိန်ချောမွေ့သည်.Alishan Alpine ကော်ဖီသည် Alishan Mountains တွင်အမြင့်မီတာ ၁၀၀၀ ကျော်တွင်ထုတ်လုပ်သည်.မဟာအလီတောင်တန်းများရှိလေသည်သန့်ရှင်းသည်,ညစ်ညမ်းမှု-အခမဲ့,နှင့်ရာသီဥတုစိုစွတ်သည်.တစ်နှစ်ပတ်လုံးမြူဆိုင်းတယ်.Alishan ၏အထူးရာသီဥတုကြောင့်,လက်ဖက်ခြောက်ကိုနှစ်စဉ်စိုက်ပျိုးသည်သာမက,ဒါပေမယ့်လည်းရာသီဥတုနှင့်မြေဆီလွှာကိုလည်းကော်ဖီ၏ကြီးထွားမှုအတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်.Alishan ကော်ဖီတွင်ထူးခြားသောအရသာရှိသည်,ခါးသီးခြင်း၊,နှင့်အတော်လေးချောမွေ့သည်.လှူသောသူ&တောင်ကြီးမြို့;t ကော်ဖီအနက်ရောင်ကိုသောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လက်ခံနိုင်တယ်.အခြားကော်ဖီများနှင့်မတူသည်,ဒါဟာသကြားမပါဘဲဆေးဝါးသောက်သုံးနှင့်တူ၏. .ထိုင်ဝမ်နှင့်ဂျမေကာတွင်ကျွန်းတစ်မျိုးတည်းရာသီဥတုရှိသည်.ထိုင်ဝမ်ရှိ Alishan ၏လတ္တီတွဒ်သည်မြောက်လတ္တီတွဒ် ၂၃ ဒီဂရီနှင့်ဂျမေကာအပြာရောင်တောင်တန်းများ၏မြောက်လတ္တီတွဒ်သည် ၁၈ ဒီဂရီမြောက်ဘက်တွင်ရှိသည်။.ထိုင်ဝမ်ရှိ Alishan ကော်ဖီစိုက်ပျိုးမှုသည် Jamaican Blue Mountain ကော်ဖီနှင့်နီးသည်.Alishan တောင်တန်းဒေသသည်မြူဆိုင်း။ နေသာသည်.နေ့နှင့်ညအကြားအပူချိန်ကွာခြားသည်,နှင့်ထုတ်လုပ်ကော်ဖီစေ့ထူးခြားတဲ့အရသာနှင့်ချစ်စရာကောင်းအနံ့ရှိသည်. ရေစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်အဘို့အအကြံပြုစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်နည်းလမ်း:10 ဂရမ်ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်,250CC နှင့်အတူလက်စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်,၈၅̊ဂ~90̊ရေပူရေ,သင်သည်မွှေးသောကော်ဖီကိုခံစားနိုင်သည် Alishan ကော်ဖီစေ့အမျိုးမျိုး:Tibica(Arabica ၏ရှေးဇာတိမျိုးစိတ်)ထုတ်ယူခြင်းနည်းလမ်း:အဝတ်လျှော်မုန့်ဖုတ်ဒီဂရီ:အလတ်စားအလင်းမုန့်ဖုတ်အလေးချိန်:226 ဂရမ်&ကျော်သူ;5 ဂရမ်(တစ်ပေါင်ဝက်)မူလနေရာ:Alishan,ထိုင်ဝမ်
ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ခိုင်မြဲစွာ core ကိုတန်ဖိုးများကိုတည်ငြိမ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းများစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ဘုံရည်မှန်းချက်မှအာရုံစူးစိုက်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမာခံတန်ဖိုးများကိုအကြှနျုပျတို့ဖောက်သည်တိုင်းတာအကျိုးခံစားခွင့်ကိုဆောင် ခဲ့. ကျွန်တော်တို့၏မစ်ရှင်ရရှိဖို့ကူညီပေးခဲ့ကြပါပြီ။